Xaaska Sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab oo Muqdisho lagu qabtay (Xagee la geeyay?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Xaaska Sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab oo Muqdisho lagu qabtay (Xagee...
Xaaska Sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab oo Muqdisho lagu qabtay (Xagee la geeyay?)
Mareykanka ayaa saddex milyan oo dollar ah dul-dhigay madaxa Cabdulqaadir Cikrama
Muqdisho (Halqaran.com) – Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa waxay Magaalada Muqdisho ku xireen haweeneyda u dhaxda mid ka mid ah Saraakiisha sar sare ee Ururka Al-Shabaab.
Ciidanka sida gaarka u tababaran ee Gaashaan oo dadka qaarkii ay u yaqaanaan (Alpha Group) ayaa xaaska Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir (Cikrama) waxaa la sheegay inay kala baxeen guri ku yaala Degmada Warta Nabadda (Ex Wardhiigley).
Ciidanka Gaashaan oo la socday dhaqdhaqaaqa haweeneydan ayaa gacanta ku dhigay, ka dib markii ay Magaalada Muqdisho u timid sidii ay ugu umuli laheyd, iyadoo hadda la sheegay inay xaamilo ahayd.
Ciidanka Gaashaan oo uu Mareykanku tababaro ayaan la ogayn halka ay ula dhaqaaqeen haweeneydaasi, mana jirto masuuliyiin dowladda ka tirsan oo ka hadashay xarigeeda.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir ayaa waxaa lagu tiriyaa Saraakiisha ugu muhiimsan ee Ururka Al-Shabaab, isla markaana uu Mareykanka doon doonayo.
Mareykanka ayaa saddex milyan oo dollar dul-dhigay madaxa Cabdulqaadir Cikrama, lacagtaasi oo loo ballanqaaday in la siin doono ciddii keenta xog lagu soo qaban karo amaba lagu qaarajin karo ninkaasi.
Mareykanka ayaa Cabdulqaadir Cikrama ku eedeeyay in uu Al Shabaab dhalinyaro uga soo qoro dalka Kenya, si ay uga barbar dagaalamaan maleeshiyada Al Shabaab.
Ninkan oo dhashay sanadkii 1979-kii, una dhashay dalka Kenya, inkastoo asalkiisu uu Soomaali yahay ayaa si wanaagsan ugu hadla luqada Sawaxiliga, waxaana bishii September ee sanadkii 2014 uu ka badbaaday weerar lagu qaaday hoy uu kaga sugnaa Magaalada Mombasa.
Booliska Kenya ayaa xilligaa dilay nin kale oo la sheegay in uu gurigaasi kula sugnaa. Sirdoonka Kenya waxay ninkan ku eedeeyeen in uu door muhiim ah ku lahaa weerarkii September, 2013 lagu galay Xarunta Ganacsiga Westgate ee Magaalada Nairobi.
Bishii October ee sanadkii 2013 ayuu ninkan ka badbaaday weerar ay Ciidamada Mareykanka ku qaadeen Degmada Baraawe ee Gobolka Shabellaha Hoose, xilligaas oo lagu sheegay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii Westgate Mall.
Sidoo kale, Cikrama ayaa bishii April ee sanadkii 2014 ka badbaaday qarax miino oo gaari uu la socday lagula beegsaday Deegaanka Haawaay ee duleedka Degmada Sablaale, ka dib markii uu khilaaf soo kala dhexgalay Amiirkii hore ee Ururka Al Shabaab, Axmed Cabdi Aw Maxamed (Godane), oo Shabaabka dhexdiisa looga yeeri jiray Sheekh Mukhtaar Cabdiraxmaan (Abuu Zubeyr), waana shan bilood ka hor intii aan weerar dhinaca cirka lagu dilin Ina Godane.
Si kastaba, tallaabada lagu soo qabtay Xaaska Cikrama ayaa waxay ku soo aadaysaa maalmo yar uun ka dib, markii ay dagaal-yahanada Al Shabaab weerar xoogan ku qaadeen xerada Camp Simba ee Deegaanka Manda Bay ee Gobolka Xeebta Kenya, halkaasoo ay ku dileen askari u dhashay dalka Mareykanka iyo laba qandaraasle oo ka tirsanaa Waaxda Difaaca ee Mareykanka.
Xaaska Sarkaal sare Shabaab ah oo lagu qabtay